ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): May 2008
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:52 PM4comments Links to this post
စင်္ကာပူမှ ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ ကော့မှုး၊ ကွန်းခြံကုန်း၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံဒေသများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့သော ခရီးစဉ်ဓါတ်ပုံများ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:34 PM0comments Links to this post
UN JOBs Vacancies in Myanmar
* Public Health Specialists
* Water and Sanitation Engineers
* Communication and Programme Communication Specialists
* Monitoring and Evaluation Specialists
* Human Resources/Administration Managers .
If you areanational or resident of Myanmar with experience in the above areas, fluency of English, with immediate availability, apply with your CV (in English) withaletter of interest for professional positions based in both the country office of
Senior Logistician, Myanmar
Medical Emergency Relief International (Merlin) Closing Date: Thursday, 31 July 2008 (added 20 May)
Operations Coordinator, Myanmar
Water and Sanitation Manager, Myanmar
Deputy Country Health Director, Myanmar
Reproductive Health Coordinator, Myanmar
Senior Project Medical Coordinator, Myanmar
Country Health Director, Myanmar
Program Advisor, Myanmar
CARE Australia Closing Date: Friday, 30 May 2008
Save the Children UK Closing Date: Sunday, 01 June 2008
Emergency Technical Positions, Myanmar
International Rescue Committee (IRC) Closing Date: Saturday, 31 May 2008
Technical Advisor, Shelter, Myanmar
World Concern Closing Date: Monday, 30 June 2008
Program Support Officer, Myanmar
Technical Advisor, Medical/Health, Myanmar
Relief Director, Myanmar
Technical Advisor, Water, Myanmar
Technical Advisor, Agriculture, Myanmar
Communications/PR Manager, Myanmar
Project Manager, Food Security, Myanmar
Cooperazione E Sviluppo (CESVI) Closing Date: Saturday, 31 May 2008
Water & Sanitation Engineer - Rapid Response, Myanmar
American Refugee Committee International (ARC) Closing Date: Sunday, 01 June 2008
Health Coordinator - Complex Emergency /Rapid Response, Myanmar
Rapid Response Coordinator - Rapid Response, Myanmar
Security Coordinator - Rapid Response, Myanmar
Logistics/Operations Coordinator - Rapid Response, Myanmar
Administration & Finance Officer - Rapid Response, Myanmar
Shelter / Construction Engineer - Rapid Response, Myanmar
Country Administrator, Myanmar
CESVI - CooperazioneeSviluppo Onlus (CESVI) Closing Date: Saturday, 31 May 2008
Emergency Volunteers, Myanmar
Australian Aid International (AAI) Closing Date: Sunday, 15 June 2008
Health Project Manager, Malaria Expert, Myanmar
CESVI - CooperazioneeSviluppo Onlus (CESVI) Closing Date: Monday, 26 May 2008
Project Manager (M/F), Maungdaw, Myanmar
Action Contre la Faim (ACF) Closing Date: Wednesday, 18 June 2008
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:31 PM0comments Links to this post
Timbaland ၏ Apologize မှ Body Frame ကို အနည်းငယ်အခြေခံထားပါသည်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:07 AM0comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:26 PM3comments Links to this post
ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့ (စင်္ကာပူ)မှ ဒေးဒရဲမြို့နှင့် တွံတေးမြို့သို့ စင်္ကာပူမှ အလှူရှင်များကိုယ်စား သွားရောက်လှူဒါန်းစဉ်
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:07 PM 1 comments Links to this post
Labels: Myanmar, Overseas Burmese Patriots, Photos
ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့ (စင်္ကာပူ)မှ မုန်တိုင်းသင့်ကျေးရွာဒေသများသို့ စင်္ကာပူမှ အလှူရှင်များကိုယ်စား သွားရောက်လှူဒါန်းစဉ်
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:02 PM0comments Links to this post
Download These Pictures In PDF File
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:51 AM0comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:17 AM2comments Links to this post
သေဆုံးသွားသူ ကျန်ရစ်သူများအတွက် ဆုတောင်းဖို့ရာ ခွင့်ပြုချက်ရယူပါ (ကိုဂျွန်မိုး)
သေဆုံးသွားသူ ကျန်ရစ်သူများအတွက် ဆုတောင်းဖို့ရာ ခွင့်ပြုချက်ရယူပါ
"ဒီနေ့စင်္ကာပူရဲလုပ်တာကိုင်တာ နဲနဲသေးသိမ်တယ်လို့ ကျနော်ထင်တာပဲ ကျတော့ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က စင်္ကာပူရဲတွေနဲ့ ပြဿနာတက်ဖို့မဟုတ်ဘူး ကျနော်က ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကော ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကို ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သချင်တယ် အဲဒါကို အခက်အခဲကြားထဲက ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျနော်ကတော့ ကျေနပ်ပါတယ်" ဟု ဆုတောင်းပွဲလာရောက်ခဲ့သူ အင်ဂျင်နီယာ ကိုဝဏ္ဏ မှပြောပြသည်။
ရဲ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လေးယောက်တစ်တွဲ သွားရောက်ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သခဲ့ကြကာ မြန်မာများမှ ရဲအရာရှိများကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသည်။
Permit to pray for the cyclone victims
Singapore - 14 days since the cyclone, and about one hundred Burmese in Singapore turned up to St. Martin's Drive on Saturday evening to holdacandlelight vigil outside the door of the Burmese Embassy in memory of the victims of killer cyclone which took away more than 100,000 lives.
About twenty plain cloths police officer blocked the road access and told that "assembling more than four persons will be an offence and consider outdoor illegal assembly" "You need to get permission from Singaporean police to hold outdoor assemblies! I advice you all to leave right now" police officer said.
A few of them crying out and emotionally told police officer "we just want to pray for the victims and allow their spirits to peacefully crossover according to our Buddhism believed". Burmese people still doesn't want to leave without prayer despite the officer’s order to leave.
Ma Han Thu working an engineer also told police officer with tearful eyes, "Do I need to apply permit for commemorate my sorrow and pain? If you were in my position, at some other country, if the authorities block you for candlelight vigil how would you feel?”
Myo Myint Maung, one prominent Myanmar student and pro-democracy activist in Singapore said "We have come to the Burmese embassy to do our commemoration service because the Burmese embassy is part of the land of Burma in Singapore and Burma is where we all belongs. So we have our sense of belonging at this embassy and no where else in this island."
After controversy an hour later Myo Myint Maung successfully negotiate with the police officer who allowed four person per group to walk to the embassy from the entrance of St. Martin's Drive which is more than one hundred meters away whilst the rest of the large group of Burmese still have to wait to take their turn to walk and pray at the dedicated praying spot. That wasalong queue waiting, holding flowers and candles in their hands.
One engineer from Wunna said "The way police was handling the event made us felt more depressed and miserable. My main intention was to pray for the victims of the cyclone at the land of Burma and not for making argument with police. No matter what, I am satisfied because I could pray for them even though we faced police restrictions and difficulties.”
After that the police allowed them to go four persons per group, most of Burmese politely gave thanks to the police officer and peacefully departed from St. Martin's Drive at 9.00p.m.
According to The Straits Time newspaper closed to 100,000 Burmese are working and studying in Singapore.
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 4:04 PM2comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:12 PM0comments Links to this post
နောက်ဆုံးစကားကတော့ --- အခုအချိန်မှာ ဘက်နှစ်ဘက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်မသိသလောက် ရှင်တို့ဘက်ကို ရှင်တို့လူတွေကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီလိုချင်တဲ့ ပြည်သူတွေရေးသမျှ စာတွေလိုက်ဖတ်ပြီး အမှန်တရားအကြောင်းတွေတွေ့တိုင်း မျောက်မီးခဲကိုင်မိသလို ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေမယ့်အစား မိမိကိုယ်ပိုင်အတွေးဥာဏ်နဲ့ ယုတ္တိရှိရှိစာတွေေ၇းပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ ကွင်းကိုတစ်ပတ်ပြေးတဲ့ တာတိုပြေးပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ နှလုံးရည် နဲ့ အမှန်တရားသစ္စာချင်း ယှဉ်တဲ့ပွဲမို့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ တာရှည်ပွဲအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူအမြင်ကတ်အောင် လုပ်ပြမနေပါနဲ့လို့လည်း အကြံပြုချင်ပါတယ်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 12:07 PM 20 comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:30 AM0comments Links to this post
ခွဲထုတ်ထားခဲ့ပြီပဲ .. ။
အကုန်ပေးခဲ့ပြီးပြီပဲ .. ။
တိုက်စားခဲ့ပြီးပြီပဲ .. ။
သေစေခဲ့ပြီးပြီပဲ .. ။
တရားဓမ္မ အားကိုးလို့မရတော့ပြီပဲ .. ။
ကူသူမဲ့ ကယ်သူမဲ့ လူမှုဒုက္ခ
မိုးခါးရေတိမ်မှာ နစ်ရပြီပဲ . ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:21 PM0comments Links to this post
ကျွန်မဟာ ဗေဒင်တွေ ယတြာတွေကို အပြည့်အ၀ယုံကြည်သူမဟုတ်သလို ၊ လုံးဝ မယုံကြည်သူလည်း မဟုတ်ပါ။ အပြည့်အ၀မဟုတ်သည့်တိုင် အထိုက်အလျောက်တော့ ယုံကြည်မှုရှိပါသည်။ နအဖစစ်အာဏာရှင်များ၏ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းလွန်းသော လုပ်ရပ်များနောက်ကွယ်မှာ ယနေ့ထိတိုင် ထိုလူများ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် မလှုပ်တလှုပ်ထိုင်နေနိုင်ခြင်းမှာ မတရားသော အောက်လမ်း ၊ ဗေဒင်ယတြာအတတ်ပညာများအချို့ ပါဝင်နေသည်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံထားပါသည်။
လွန်ခဲ့သောရက်ပိုင်းခန့်က အတွင်းလူများထံမှ တိကျသော သတင်းတစ်ခုကို ကျွန်မ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် ဦးသန်းရွှေကြီးဟာ သူ့ရဲ့နေ၀င်ချိန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့ တဘောင်ကို သိရှိပြီးချိန်မှာ ယခုလို ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကို ပိုမိုဝင်ခွင့်မပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေကြီးကို ဟောကြားထားသော အကြောင်းအရာမှာ `အနောက်နိုင်ငံသား အဖြူစစ်သားတစ်ယောက်ဟာ စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်အတွင်းကို ခြေချပြီး ရောက်ရှိလာခဲ့ရင် .. လက်ရှိစစ်အာဏာရှင်တို့၏ နေ၀င်ချိန်ရောက်ရှိပြီ´ဟု ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်မှုအနေနဲ့ ပြန်လည်ယတြာချေမရတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို မြန်မာပြည်မြို့နယ်များသို့ လုံးဝ ၀င်ခွင့်မပေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေဘက်မှ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် အလွန်အကျွံကူညီချင်နေတာဟာ စစ်အာဏာရှင်အတွက် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှု ဖြစ်နေပါတယ် .. ။ ယခုအချိန်မှာ ပြည်သူလူထုကို သေချာကူညီနိုင်ဖို့က ပထမအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတွေ မပါပေမယ့် ပါသင့်သလောက်လည်း တွဲပါသွားရမှာပါ။ မုန်တိုင်းဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်လုပ်လို့ တိုက်ခတ်လာတာမဟုတ်ပေမယ့် ယခုကဲ့သို့ သေဆုံးသူများ တစတစ ပိုမိုများပြားနေတာ ၊ လိုအပ်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ မလုပ်ခဲ့တာ ၊ နိုင်ငံတကာအကူညီတွေ လက်မခံတာ ၊ ငတ်ပြတ်နေသော ပြည်သူလူထုကို ထိရောက်စွာ အမှန်တကယ်ကူညီမှုမပေးတာ ... အစရှိသောအချက်များဟာ လူမှုရေးအနေနဲ့ အင်မတန်စိတ်ထိခိုက်နာကျင်မှုဖြစ်မိသလို နိုင်ငံရေးအရလည်း အာဏာရှင်ဘက်မှ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အခါမှာ အနောက်နိုင်ငံ ကယ်ဆယ်ရေးလူတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို သွားဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထု လိုအပ်နေသော အကူညီရဖို့အတွက်ရော ၊ နိုင်ငံရေးအနေနဲ့ တဘောင်ကို ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကာကွယ်နေသော စစ်အာဏာရှင် နေ၀င်ချိန်ရောက်ဖို့အတွက်ရော ... ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ထဲရောက်သွားအောင် ကျွန်မတို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအားလုံး တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ဒီအချိန်ခါကြီးထဲမှာ မယုံကြည်သူနဲ့ ယုံကြည်သူ ရောနေမှာလည်း ကျွန်မ နားလည်ထားပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ဟာ နေပြည်တော်မှာ ညီလာခံတက်ရင် ရှေးခတ်ဘုရင့်ဝတ်စုံဝတ်တာ ၊ ဘုရားပေါ်မှာ ၀က်ဆွဲပြီး လမ်းလျှောက်တာ ... ထိုကဲ့သို့လုပ်ရပ်မျိုးတွေကို လုပ်နေခြင်းမှာ သွက်သွက်ခါအောင်ရူးသွား၍ လုပ်နေခြင်းမဟုတ်။ စိတ်ဖောက်ပြန်နေခြင်းလည်းမဟုတ်။ တွက်ချက်လေ့လာပြီး အာဏာရှင်များကိုးကွယ်သော ဆရာကြီးများစကားအတိုင်း အာဏာတည်မြဲအောင် မကောင်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ပလောကမှာ ကျွန်မထက်အများကြီး ပိုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူများစွာ ရှိကြတာမို့ စစ်အာဏာရှင် ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ လက်ရှိဟောကြားခြင်းခံထားရသော တဘောင်ကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ကျေးဇူးပြုပြီး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးကြပါလို့ ကျွန်မတောင်းဆိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ အနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာ မြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်ကူညီဖို့ စိတ်အားအထက်သန်ဆုံးအချိန်လည်း ဖြစ်နေတာမို့ အခြေအနေလိုက်လျောညီထွေချိန်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ကျေးဇူးပြုပြီး လက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ပေးကြဖို့လည်း တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးကို မျိုးစုံသောဒုက္ခတွေနဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းနေတဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင်အုပ်စု အမျိုးပါပြုတ်သွားအောင် ဖြုတ်ရမှာပါ။ ပြည်သူလူထုဟာ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကြံ့ဖွတ်တွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှု ၊ ဒုက္ခပေးမှုတွေကို လူပါးဝစွာ ခံနေရပါတယ်။ ဒါတွေကိုမြင်ရတဲ့ ကျွန်မနှလုံးသားဟာ အင်မတန် နာကျင်မှုဖြစ်ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြည်သူလူထုဟာ ကမ္ဘာမှာ ဒုက္ခအရောက်ဆုံး ၊ သနားစရာအကောင်းဆုံး ဘ၀ကို လုံးလုံးရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ .. ။ မြန်မာဆိုတာ ဗမာဆိုပြီး ပြန်လည်ခေါင်းမော့လာဖို့ ၊ လူတန်းစားအားလုံး စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ လုံးဝပျောက်ကွယ်မှပဲ ဖြစ်မှာပါ .. ။
အာဏာရှင်၏ဆရာကြီးများ ဟောကြားလိုက်သော တဘောင်
`အနောက်နိုင်ငံသားစစ်စစ် အဖြူစစ်သားတစ်ယောက်ဟာ စစ်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ လက်ရှိအချိန်ကာလအတွင်း ၂၀၀၈မှာ မြန်မာနိုင်ငံမြို့တော်အတွင်းကို ခြေချရောက်ရှိလာခဲ့ရင် .... စစ်အာဏာရှင်များ ဘုန်းကံရော ၊ ရှိသမျှ အဆောင်အယောင် အာဏာများအားလုံး ကျဆင်းပြီး နေ၀င်ချိန် ရောက်ကိုရောက်ရလိမ့်မယ် ........ ´
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:07 PM 10 comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:52 AM6comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:09 PM3comments Links to this post
စင်္ကာပူရှိ မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့မှ အလှူငွေများကို လပ္ပတ္တာမြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများနှင့် အခြားကျေးရွာများသို့ လှူဒါန်းခြင်း
စင်္ကာပူတွင် ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့မှ ဦးစီးကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေများဖြင့် အလှူရှင်များကိုယ်စား ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများမှ လပ္ပတ္တာမြို့နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ လိုအပ်သော အစားအသောက် ပစ္စည်းများ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ စင်္ကာပူ မှ စေတနာရှင်များကိုယ်စား ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့မှ လပွတ္တာမြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း(၄)ကျောင်း သို့ ဆန်အိတ် (၂၈၀) ၊ ကုန်ခြောက်များ ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ အချိုရည် ၊ အ၀တ်အစားများ နှင့် ငွေသား (၁၂) သိန်းခန့် စုစုပေါင်းမြန်မာငွေ ကျပ်သိန်း (၁၀၀)ခန့် လှုဒါန်းပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများမှ စင်္ကာပူမှစေတနာရှင်များကိုယ်စား လေမုန်တိုင်းဒဏ် အပြင်းအထန်ခံစားနေရသည့် ကျေးရွာများရှိ ပြည်သူများ၏လက်ထဲသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖြန့်ဖြူးလှူဒါန်းနေသည့်အပြင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကိုကျော်သူ၏ နာရေးအဖွဲ့ကြီးသို့ စင်္ကာပူငွေသားတစ်သောင်းခန့် တန်ဘိုးရှိသော ဆန်အိတ် (၅၀၀) လှုဒါန်းပြီးဖြစ်ကြောင်း သာဓုအနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် လေးစားစွာ အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
Labels: Donations, Myanmar, News And Activities, Overseas Burmese Patriots
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:29 AM0comments Links to this post
အစာမရှိတဲ့ ၀မ်းဟောင်းလောင်းနဲ့အလောင်းလေး တွေကြား
သူ့ မျက်လုံးထဲက မျက်ရည်ပူတွေနဲ့.....။
သူ့ မျက်လုံးထဲက မျက်ရည်ပူတွေ ကြားမှာ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 4:37 PM0comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:23 PM2comments Links to this post
၁၀-၅-၂၀၀၈ အထိ စင်္ကာပူတွင် စုစုပေါင်းရရှိသော အလှူငွေ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:22 PM0comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 8:13 PM4comments Links to this post
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ အမြန်ဆုံးဝင်ရောက်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု (စင်္ကာပူ)
"လူသားချင်းစာနာသည့် အထောက်အပံ့များနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ " အမြန်ဆုံးဝင်ရောက်နိုင်ရန် စင်္ကင်္ာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာလူထုမှ သဘောထားလက်မှတ်များ စုစောင်းမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။ ၄င်းကောက်ခံရရှိသော လက်မှတ်များကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ စေလွှတ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသံရုံးများသို့ တနင်္လာနေ့တွင် အပ်နှင်းမည်ဟု သတင်းရရှိပါသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာများ လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် လွယ်ကူစွာ ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ပင်နီဇူလ ပလာဇာ (၅)လွှာရှိ လမ်းပြကြယ်စာကြည့်တိုက်တွင် စနေနေ့ နေ့လည် (၁၂) နာရီမှ စတင်ကာ တနင်္ဂနွေနေ့ အထိ၎င်း၊ မဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်တွင်မူ စနေနေ့ညနေ (၈း၃၀) မှ (၁၀) နာရီအတွင်း လက်မှတ်များ လာရောက်ထိုးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဂျေမိုး မေလ ၉ရက်၊ ၂၀၀၈။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:45 PM3comments Links to this post
စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရင်နာဖွယ် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားသူပုံများ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:59 PM 1 comments Links to this post
နာဂစ်စ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ (စင်္ကာပူ)
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားသူများကို ကောင်းရာသုကတိလားစေရန်နှင့် လက်ရှိဒုက္ခအတိရောက်နေသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုသူများအား အသိပေးလိုပါသည်။ မြတ်ဘုရားရှေ့မှာတောင်းဆုပြုလိုသူများနှင့် "မိမိတောင်းဆိုချင်သမျှကို မိမိဆန္ဒရှိတဲ့နေရာမှာ မိမိကြိုက်သလိုတောင်းဆိုကြဖို့အတွက်" အရင်ဦးဆုံး ဘုရားတရားအေးရိပ်ကို ဖိတ်ခေါ်လိုပါသည်။ စင်္ကာပူရှိ Eunos ရထားဘူတာအနီး မင်္ဂလာဝိဟာရကျောင်းတိုက်တွင် စနေနေ့ညနေ ၈း၃၀ မှ ၉း၃၀ အထိ ဆုတောင်းပွဲကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:41 PM 1 comments Links to this post
၈-၅-၂၀၀၈ အထိ စင်္ကာပူတွင် စုစုပေါင်းရရှိသော အလှူငွေ (OBP)
မေလ၉ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းလေယဉ်နှင့် ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ(စင်္ကာပူ) မှ မျိုးချစ်မြန်မာအချို့ဟာ ကယ်ဆယ်ရေး ဆေးဝါး၊ အ၀တ်အထည် ပစ္စည်းများနှင့်အတူ စင်္ကာပူ မှ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မှ တစ်ဆင့် လေမုန်တိုင်း ဒဏ် ကို အဆိုးဝါးဆုံးခံခဲ့ရသော လပွတ္တာ မြို့နယ်သို့သွားရောက်တိုက်ရိုက် အကူအညီပေးရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:28 PM0comments Links to this post
ဒေါ်မာမာအေး ရေးသားသီဆိုထားသော အသက်ရှည်ကျန်းမာဖို့လှူကြစို့သီချင်းကို ဤနေရာမှ ဒေါင်းလော့ခ်ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 8:38 PM0comments Links to this post
အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်အားလုံးကို နာရီပိုင်းအတွင်း ဖြုတ်ခြွေဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ မုန်တိုင်းသတင်းကို မြန်မာပြည်မှာ သေသေချာချာ အထူးသတင်းအဖြစ် ကြေငြာခြင်းမရှိခဲ့တာ အံ့သြရင်နာလို့မဆုံးပါဘူး။ ကျွန်မတစ်သက်မှာ ငယ်စဉ်အချိန်က တစ်မြို့လုံးရေအတိဖုံးလွှမ်းခဲ့ရပုံကို ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတောင် အင်မတန်သွေးပျက်ထိတ်လန့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒုက္ခအတိရောက်နေချိန် .. ကျွန်မတို့ ပဲခူးနယ်မြေအဲဒီလို ဖြစ်နေခဲ့တာ ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ကြသလို သတင်းဌာနတွေမှာလည်း အထူးတလည်ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး ... ။ လာရောက်လှူဒါန်းကြတဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း နအဖလူတွေလက်ထဲ အားလုံးလွှဲလိုက်လို့က လုံလုံလောက်လောက် လက်ထဲမရောက်ခဲ့ပါဘူး .. ။ အစားအသောက် ၊ ဆေးဝါး ၊ ကျန်းမာရေး အားလုံးဒုက္ခရောက်တာကို ကြုံဖူးသူမို့ အဆပေါင်းများစွာပိုဆိုးတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဒုက္ခအတွက် အများကြီးကြေကွဲဝမ်းနည်းမိပါတယ် .. ။
မုန်တိုင်းအပြီး လူသေအလောင်းပုံတွေမြင်ရတိုင်း ရင်ထဲတစ်ခါဆို့နင့်မိတယ် .. ။ ဆိုးရွားလှတဲ့အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုဒုက္ခဆိုးတွေကများ ထပ်မံဝင်ရောက်လာပါလိမ့် .. ။ သဘာဝဘေးအန္တာရယ်ကြီးကို မဖြစ်အောင် တားဆီးလို့မရပေမယ့် မိမိဘက်မှ ကာကွယ်နိုင်တာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရပါတယ် .. ။ ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့အရေးတကြီးထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ၊ အသံ နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှ သေသေချာချာ သတိပေးကြေငြာချက် ၊ သတင်းစားခေါင်းကြီးပိုင်းတွေမှာ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို အထူးဖော်ပြချက် .. အစရှိတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ် .. ။ ဒါပေမယ့် ... စစ်အာဏာရှင်အပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး ဘာများဆောင်ရွက်နေကြလဲ နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။
လူသေနှုန်းတွေ အနည်းဆုံး သောင်းဂဏန်းခန့် အရမ်းများပြားလွန်းချိန် အသက်ရှင်ကျန်ရှိနေသော ပြည်သူများ စားဝတ်နေရေးအတွက် အများကြီး ကူညီရပါဦးမယ် .. ။ အဲဒီအတွက် စစ်အာဏာရှင်တွေအားလုံးဘက်မှ လိုက်မကူညီနိုင်ရင်တောင် ဘေးကနေ ကူညီချင်လွန်းလို့ အာပေါက်အောင်ခွင့်တောင်းနေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းအကူညီကို ၀မ်းသာအားရလက်ခံသင့်ပါတယ် .. ။ ဒီအချိန်ဟာ အယူအဆတွေ ၊ နိုင်ငံရေးတွေ ၊ လူထုဆန္ဒတွေ ကောက်ခံစည်းဝေးနေရမယ့် အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေဆိုးကြီးကို အကောင်းဆုံးပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရချိန်ပါ .. ။ မိမိဘက်မှ လိုအပ်နေချိန် သူများထံက အကူညီကို တောင်းယူရမယ့်အချိန်ပါ .. ။ အဖိုးတန်လှသော လူ့အသက်တွေအတွက် အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်မယ့်သူတွေ လာဖို့အရေး ... ဗီဇာ ... ဆိုတာကြီးနဲ့ အတင်းတံခါးပိတ်ထားနေပါလားနော် ... ။
ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေသူတွေထဲမှာ စစ်သားမိသားစုအသိုင်းဝိုင်းတွေလည်းပါမယ် ... ကြံ့ဖွတ်ဆိုတာတွေလည်း ပါမယ် .. အာဏာရှင်လက်အောက်က အလုပ်သမားဝန်ထမ်းအားလုံး ပါဝင်နေမယ်... ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်မယ် ... ဒီလူတွေအားလုံးကို မခွဲခြားဘဲ ကူညီဖို့အရေး နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေက ကြိုးစားနေတာကို အသာတကြည်လက်တွဲဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဒီထက်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး .. ။ ဆက်သွယ်ရေးနှေးကွေးမှုတွေအပြင် ၊ အလုပ်လုပ်ပုံလေးပင့်မှုကြောင့် မဖြစ်သင့်တာတွေတော့ ထပ်မံဖြစ်လာမှာ ရင်လေးနေမိပါတယ်။ မိမိဘက်က စနစ်တကျ မကိုင်တွယ်တတ်ရင် တတ်သိနားလည်သူတွေက စေတနာဖြင့် ကူညီပေးမှာကိုလည်း မလိုချင်မှတော့ ......... မုန်တိုင်းထဲသာ ထိုတစ်အုပ်စုလုံး ပါသွားသင့်ပါတယ် ... ။
ပြည်တွင်းရှိမြန်မာများအားလုံး မီးဘေးတစ်မျိုး ၊ စီးပွားရေးကျပ်တည်းမှု အငတ်ဘေးတစ်မျိုး ၊ လေဘေးတစ်မျိုး ၊ ရေဘေးတစ်မျိုးဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဒုက္ခတွေကြုံနေရတာ မင်းကောင်းမင်းမြတ်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သလို စနစ်တကျပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ပုံမရှိသေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ... ။
ဒီဒုက္ခသောကတွေအားလုံးလက်အောက်ကနေ ပြည်သူအားလုံးကို လွတ်မြောက်အေးချမ်းစေချင်ပါပြီ ... ။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:29 PM 1 comments Links to this post
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 11:09 AM0comments Links to this post